Ma runbaa in strawberries ay naaxinayaan? Runta oo dhan halkan | Ragga Stylish
Strawberries waa naaxinayaan. In kasta oo ay u muuqato wax aan caadi ahayn, haddana weli waxaa jira dad bartamihii sannadka 2020 weli sheeganaya in strawberries ay kaa dhigeyso mid buuran. Waa miro hodan ku ah fiitamiin C, folic acid, iron, potassium, magnesium, fiber iyo nafaqooyin kale oo waxtar u leh jirka. Si kastaba ha noqotee, waa cunto ay dadku ka baqayaan inay cunaan maxaa yeelay waa kaloriin badan. Tani waa khalad. Waa cagsi. Waa miro, marka laga reebo dhammaan nafaqooyinka iyo astaamaha faa'iido u leh jirka, ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan miisaanka oo yaraada maadaama ay leedahay kaloori aad u yar.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato runta in miraha strawberries ay naaxinayaan iyo waxyaabaha ay mirahaani leeyihiin.
1 Ma runbaa in strawberries ay naaxinayaan?
2 Strawberries si aad u lumiso miisaanka
3 Strawberries waa naaxinayaan: been
Ma runbaa in strawberries ay naaxinayaan?
Waxaan ka hadleynaa nooc midho miro ah oo ku habboon in lagu daro saladhka, samee smoothies iyo cuntooyinka kale sida kuwa caadiga ah ee loo yaqaan 'smoothies'. Sida ugu wanaagsan ee loo cuni karo miraha loo yaqaan 'strawberries' waa in la cuno saxarka ka dib marka la dhaqo. Sidaas darteed, waxaan ka heli karnaa natiijooyin wanaagsan iyo isku-darka saxda ah ee dhammaan nafaqooyinka noolaha. Waa nooc miro ah oo leh tabarucaad nafaqo oo aad u weyn oo waxtar weyn u leh kuwa miisaanka iska dhimaya. Taariikhda ayaa lagu xusay taariikhda in strawberries ay naaxinayaan tan iyo markii ay awoodaan inay xajistaan ​​dareeraha. Si kastaba ha noqotee, tani maahan sidaas.
Waxay yihiin miraha leh kalooriya aad u yar iyo xaddi badan oo faybar ah oo ka caawiya hagaajinta socodka mindhicirka. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ognahay in dheef-shiid kiimikaadka uu awood u leeyahay inuu si dhakhso leh u milmo cunnooyinka qaarkood sida strawberries waxayna naga caawin doontaa inaan yeelano calool jilicsan markasta. Dad badan ayaa is bedbeddela marka maalinba maalinta ka dambeysa habeenkiina waxay muujiyaan calool aad uga weyn subaxdii Tan waxaa u sabab ah cunista cuntooyin badan oo warshadaysan oo leh faybar yar ama cunnida dhakhsaha badan. Sidoo kale waa inaad tixgelisaa qaabdhismeedka qaabdhismeedka jirka ka hor intaadan xukumin cuntada.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin miraha loo yaqaan 'strawberries' ayaa ah kuwo aad ugu wanaagsan jirka inuu yeesho dheefshiidka wanaagsan iyo socodka wanaagsan ee xiidmaha. Aan aragno waxa ka mid ah guryaha:
Waxay leedahay astaamo anti-bararka. Tani waxay ku habboon tahay kuwa dareema dibiro badan ama qaba xanuunno qaarkood.
Awoodda kordhinta heerarka haemoglobin iyada oo ay ugu wacan tahay maadadda birta ah. Strawberries waxay leeyihiin xaddi badan oo bir ah waxayna yeelan kartaa saameyn caafimaad oo lamid ah lentil.
Waxay leeyihiin ficil antioxidant sababo laxiriira manganese-kooda sare
Kaliya maahan inay hagaajiyaan socodka xiidmaha laakiin waxay sidoo kale ka caawiyaan caafimaadka lafaha. Tani waa sababta oo ah waxay ku badan yihiin potassium, magnesium, iyo fitamiin K.
Waxay ka caawisaa hoos u dhigida heerka kolestaroolka xun ee dhiigga ku jira.
Strawberries si aad u lumiso miisaanka
In kasta oo dadku fikraddan ka qabeen in strawberries ay naaxinayaan, waa nooc miro fiican haddii aad rabto inaad miisaankaaga dhinto. Waan ognahay in faybarku yahay aalad aad muhiim u ah oo caloosha ka dheregsan. Cuntada hodanka ku ah fiber-ka waxay qaadataa waqti dheer in la dheefshiido oo ay keento dheef-shiid kiimikaad aad u tayo badan. Marka lagu daro xaqiiqda ah in strawberries ay aad uga dheregsan yihiin miraha kale, maadaama ay leeyihiin kalooriyaal yar, wax badan ayaad cuni kartaa. Sidan oo kale, waxaad ku yareyn kartaa dareenka gaajada xoogaa kalooriyada jirka ku jirta.
Haddii aan falanqeyno kalooriyada ku jirta strawberries, waan aragnaa taas 100 kii garaam midkiiba wuxuu leeyahay 33 kalori oo keliya. Taas macnaheedu waxa weeye waad cuni kartaa inta aad jeceshahay iyada oo aan laga shalaayi doonin. Waxaad u badan tahay inaad ka farshaxan tahay cunista miraha geedka 'strawberries' marka loo eego kalooriyeyaasha aad geli doonto. Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka jecel inay cunaan maddiibad miraha loo yaqaan 'strawberries', waa inaad ogaataa in kaliya 53 kalori ay jidhkaaga galaan oo keliya 8 garaam oo sonkor dabiici ah. Maskaxda ku hay in sonkorta dabiiciga ah ay ka kooban tahay fructose isla markaana aysan ku yeelan wax saameyn taban oo keliya jirka sida sonkorta miiska.
Haddii aad lasocotid miraha kareemka, kareemka ama sonkorta, waa caadi in kalooriyada ay si aad ah u kororto. Halkan waa halka la dhihi karo in strawberries ay kaa dhigeyso mid buuran. Strawberries kareem leh badanaa waxay leeyihiin qiime dhan 240 kaloori. Miraha kale, mooska, pear, tufaaxa waxay leeyihiin kalooriyaal ka badan miraha loo yaqaan 'strawberries'. Si kastaba ha noqotee, kama walwalayo wax badan oo ku saabsan tirinta kalooriyadaas. Asalka luminta dufanka ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay cunnooyinka kale ee aadka loo farsameeyo ee leh qaddar badan oo kalooriyaal ah iyo qadar yar oo nafaqooyin ah.
Strawberries waa naaxinayaan: been
Sidoo kale ma aha in la sameeyo cuntada loo yaqaan 'strawberry diet', oo ka kooban oo keliya, shirkado maalin kasta iyo saameynteeda caloosha jilcisa oo kaa caawin doonta inaad miisaankaaga dhaqso u dhacdo. Tani ma ahan tan. Markaa kaliya waxaad waayi doontaa dareereyaal aad dib uheli doonto hal maalin un. In kasta oo ay hodan ku yihiin nafaqooyinka, waa in aan ogaanno in strawberries ay ku yar yihiin nafaqooyinka qaarkood ee lagama maarmaanka u ah jirka. Waa muhiim in la cuno strawberry saafi ah sida ugu macquulsan. Maaha wax xiiso leh in lagu qaato casiirka ama ku raac sonkorta, kareemada maxaa yeelay waxay kordhinayaan kaloriintooda mana kaa caawin doonaan inaad miisaankaaga dhinto.
Maaha in strawberries ay kaa dhigeyso mid khafiif ah, laakiin waa inay kaa caawiyaan inaad kaa dheregto qaadashada kaloriinta hoose iyo nafaqada sare. Waxaa jira dad soo bandhigaya illaa hal kiilo oo ah strawberries maalin kasta cuntadooda. Ma ahan wax isku murugsan gabi ahaanba, laakiin sidoo kale laguma talin lahayn sidoo kale. Way kafiican tahay kaladuwanaanshaha miraha si loo helo waxqabad weyn oo nafaqeeyayaalka yar yar.
Tusaalaha sida loogu soo bandhigo miraha loo yaqaan 'strawberries' cuntada ayaa noqon doona labada soo socota.
Quraac: 400 g oo ah strawberries + caano fadhi ama caano khudradeed + boorash
Cunto fudud: 350 g oo ah strawberries
Qadada: maraq khudradda ah + borotiinka (digaag ama hilib digaag) + 300 g oo ah strawberries.
Cunto fudud: 350 g oo ah strawberries.
Casho: 450 g oo ah strawberries + caano fadhi ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku celinayaa in maalintani ay ka sii talo badan tahay oo midhaha kala duwanaanayso.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan xaqiiqda ah in miraha strawberries ay naaxinayaan iyo waxa hantidoodu tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Strawberries waa naaxinayaan